MA GARBAA DIB U DHACA IYO FADHIIDNIMADA MUSLIMIINTA?!!. – Sumcadda Islaamka
Shaki kuma jiro in Muslimiinta diintooda u sheegtay in dunidan insaanka ay iyagu ka mid yihiin sayid iyo khaliif looga dhigay.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30).
“Bal xus oo dadka u sheeg waqti uu rabigaa ku yiri Malaa’igta Aniga waxaan dhulka u yeelayaa mid masuul ka noqda oo daga oo maamula,markaasay Malaa’iktii yiraahdeen ma waxaad dhulka ku beereysaa mid fasahaadiya oo dhiigga ku daadiya anaga oo ku tasbiixsanayna mahad celintaada oo ku dahirayna Adiga,Alle wuxuu yiri:-Aniga waxaan ogahay wax aydaan ogayn”.
Shaki kuma jiro in Muslimiinta diintooda u sheegtay inay ka mid yihiin bani aadamka lagu shubay borograamka ku diran dunida ee loo yeelay caqli intay gees walba ka baaraan ay oga jibo keeni karaan siraha ku qarsoon dunida si ay nolosha ugu fududaato.
“وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70)
“Waan karaameynay bani aadamka waxaanan ku xambaarnay oon u dirnay Berri iyo Badba oo waxaan ku irsaaqnay waxyaabaha wanwanaagsan oo waxaan ka sara marinay wax badan oo wixii aan abuurnay ah”.
Muslimiinta diintooda waxay u sheegtay in dunidan toodii tahay oo loo sakhiray,waxayna ku dhiiri galisay inay fantaan oo risiqa iyo nolosha ka dhex raadsadaan.
“هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ”.
“Eebe waa midka idiinka dhigay Arlada mid idiin dulleysan ee inta ku socotaan dacaladeeda cuna risqigiisa oo ogaada in xaggiisa ay tahay soo kulminta dambe”.
Muslimiinta diintooda waxay u sheegtay inay ku fekeraan koonka,oo ay raad raacaan siraha iyo soo jireenkiisa oo fiiro dheer u yeeshaan si ay u fahmaan sida koona ku billowday iyo sida ay u shaqeeyaan asbaabta iyo qaanuunada kowniga ah.
“Waxaad ku tiraahdaa dhulka ku socda oo eega sida Eebe u bilaabay Abuurka dunida iyo inta dul saaran,sidaaso kale ayuuna Eebe intaa dabadeed u abuuri doonaa Duni dambe oo si daa’im ah loogu noolaan doono waayo Alle waa mid wax kasta awooda”.
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13)
“Alle wuxuu idiin sakhiray wax Allaaliyo waxa samaawaadka iyo Arlada ku sugan oo dhamaantood xaggiisa ka ahaatay,laakiin arintaas waxay uun wax ku qaadasho u tahay Qoomka fekeraya”.
Muslimiintii waxay u qaybsamaan qayb bataatan ka soo horjeeda inaan adduunyo laysku mashquulin oon waqti iyo cilmi masaariif yar raadin ka badan la galin,iyo in kolkay horomar gaalo samaysay arkaan yiraahdaa anagaa lahayn oo aad naga soo gaarteen gaalooy horomarkaan aad soo kordhiseen.
Waxaadba mooddaa inay ilaaween halhayskii ahaa aabahay ayaa faras lahaan jiray waxaa dhaanta anigaa iminka dameer leh.
Hadaba xagee muslimiinta laga haystaa oo ay mashaqadan ay asaagood oga hareen oga timid,sidee bay isaga mooseen dhiiri galintan rabaaniga ah ee iyaga faraysa inay cilmiga iyo caqliga kaashadaan?!!
ARIMAHA DIIMAHA IYO FIRQOOYINKA., CAALAMKA ISLAAMKA, DAAWO VIDEO